भीरबाट खसेर किशोरीको मृत्यु ! परिवार मा रुवाबासी …पूरा हेरि शेयर गरौ – PathivaraOnline
Home > समाचार > भीरबाट खसेर किशोरीको मृत्यु ! परिवार मा रुवाबासी …पूरा हेरि शेयर गरौ
अछाम (रासस) / अछाममा भीरबाट खसेर शनिबार एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ कालिकास्थानमा भीरबाट खसेर स्थानीय मीनबहादुर चलाउनेकी १६ वर्षीया छोरी चेतना चलाउनेको मृत्यु भएको हो । घरबाट खर काट्न गएकी चेतनाको दिउँसो १ बजेतिर वडाको भन्डारखोला माझबाटे भन्ने भीरबाट खसेर घटनास्थलमै ज्यान गएको परिवारले जनाएको छ ।
भर्खरै भयो भयानक दुर्घटना : नारायणघाटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुदा १९ जना……